मुक्तिनाथ मन्दिर कसरी जाने ? खर्च कति लाग्छ ? - Our Tourism News
२०७८ आश्विन ९, शनिबार | २०७८ आश्विन ३० | ourtourismnews@gmail.com
मुक्तिनाथ मन्दिर गण्डकी प्रदेशको हिमाली जिल्ला मुस्ताङ मा पर्दछ । यस जिल्लाको सदरमुकाम जोमसोम हो । समुन्द्र सतहदेखि २०१० मीरटरर उचाईमा रहेको यस जिल्लाको हावापनी सुख्खा ठण्डा रहेको छ ।
जिल्लाको पूर्वमा मनाङ, पश्चिममा डोल्पा, उत्तरमा चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्वत र दक्षिणमा म्याग्दी जिल्ला रहेको छ । धौलागिरी हिमाल ८१६७ मी र निलगिरी हिमाल ७०६० पार गरेर आउनु पर्ने भएकाले यस जिल्लालाई हिमालपारीको जिल्लाको नामले चिनिन्छ । धौलागिरी र निलगिरी दुई अग्ला हिमशिखरको विचमा अवस्थित यस जिल्लाको करिब बिच भाग भएर काली गण्डकी नदी बगेको छ ।
यस जिल्लाको पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा मुक्तिनाथ मन्दिर, दामोदर कुण्ड, टिटी ताल, निलगिरी हिमाल, धौलागिरी हिमाल, ठिनी घरपझोङ गढी, कैसाङ क्याम्प (खम्पा क्याम्पु), ढुम्बा ताल, तिलिचो ताल, तिलिचो बेसक्याम्प, थारूघाङ्ग भ्युटावर, तातोपानी कुण्ड, रक क्लाइम्विङ, फुक्केलिङ पुरानो गाउँ आदि रहेका छन् ।
हिन्दू र बौद्ध धर्मालम्वीहरुको प्रशिद्ध तिर्थस्थल हो मुक्तिनाथ मन्दिर । ३८ सय मिटर उचाईमा रहेको मुक्तिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न स्वदेशी तथा विदेशीहरु पर्यटक पुग्ने गर्छन् । वि.सं १८७१ मा निर्माण गरिएको मुक्तिनाथ मन्दिर पेगोडा शैलीमा रहेको छ ।
मन्दिरभित्र भगवान् मुक्तिनाथको तामाको मूर्ति रहेको छ । मुक्तिनाथको मूर्तिको दाँयापट्टि उभिएको लक्ष्मीको मूर्ति र बाँयापट्टि उभिएको सरस्वतीको मूर्ति रहेको छ भने तामाको छानो भएको यस मन्दिरको पित्तलको गजुरमा सुनको जलप लगाइएको छ । मुक्तिनाथको दर्शनको लागि विशेषतः चैत्राष्टमी, रामनवमी, ऋषितर्पणी, बडादशैं आदिपर्वहरु महत्वपूर्ण मानिन्छन्। यसका अलवा मनले चिताएको पुग्ने विश्वासका साथ यहाँ पुग्नेले १ सय ८ धारा र २ वटा कुण्डमा जम्नै लागको पानीमा स्नान गर्ने गर्छन् ।
photo by Nepal Journal
जोमसोम अर्थात मुक्तिनाथ जान पछिल्लो समय धेरै नै सजिलो बनेको छ । देशका प्रमुख शहरहरुबाट सजिलै गाडिहरु पाउने गर्दछ । अझ काठमाडौँबाट सोझै मुक्तिनाथ सम्मको गाडि पाईन्छ ।
यदि तपाई काठमाडौँ तथा अन्य जिल्लाहरुबाट मुक्तिनाथ दर्शन तथा घुम्न जादै हुनुहुन्छ भने भाडाको गाडि चढेर पुग्न सस्तो पर्दछ । देशका विभिन्न शहरहरुबाट गाडि चढ्नुहोस् र पोखरा वा म्याग्दीको बेनी पुग्नुहोस् र बेनीबाट बिहानको समयमा सिधै जोमसोमको लागि बस र जीप पाइन्छ । तर पर्यटक बढी जाने सिजनमा टिकट पाउन अलि गाह्रो पर्दछ ।
यदि तपाईले टिकट पाउनुभएन भने बेनीबाट मुस्ताङको घाँसासम्म पुग्नुहोस् र त्यहाँबाट जोमसोमको बस पाइन्छ । जोमसोम पुगेपछि कागबेनी मुक्तिनाथसम्म सजिलै बस जीप पाइन्छ । यदि तपाई माथिल्लो मुस्ताङ पनि घुम्ने योजना बनाउनुभएको छ भने कागबेनीबाट छुसाङको गाडि चढ्नुुहोस् र त्यहाँबाट लोमान्थाङसम्म जीपको यात्रा गरेर पुग्नुहोस् ।
मुक्तिनाथ कागबेनी र जोमसोम लगाएका ठाउँ घुमेर फर्कन लगभग १० हजार भए पुग्छ । हामीले काठमाडौँ देखि मुक्तिनाथ सम्मको खर्चको हिसाव गरेका छौँ ।
तर विभिन्न शहरहरुबाटको खर्च थोरै मात्रामा फरक हुन सक्छ । पहिलो दिन काठमाडौंबाट ८ सय रुपैयाँमै बेनी पुगिन्छ । बेनीमा ५ सय रुपैयाँमा होटल पाइन्छ र खाना पनि त्यति महँगो छैन् । दोस्रो दिन बेनीबाट ९ सय रुपैयाँमा जोमसोम पुगिन्छ । त्यहाँ १ हजारमा कोठा पाइन्छ । यहाँ अलि खाना महँगो छ । यहाँ ५ सय रुपैयाँ छाक खाना पाइन्छ ।
तेस्रो दिन जोमसोबाट करिब ३ सय रुपैयाँ भाडामा मुक्तिनाथ पुगिन्छ । मुक्तिनाथ दर्शन पश्चात यहि रुट भएर र्फकन सकिन्छ ।